Ireland: Koox hubeysan oo weerar ku qaaday hotel ku yaal magaalada Dublin | shumis.net
Home » Layaab » Ireland: Koox hubeysan oo weerar ku qaaday hotel ku yaal magaalada Dublin
Ireland: Koox hubeysan oo weerar ku qaaday hotel ku yaal magaalada Dublin
Ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay labo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii Jimcihii shalay koox hubeysan ay weerar ku qaadeen hotel ku yaal magaalada Dublin oo ay ka socotay munaasabad ciyaaraha Feerka oo ay soo qaban qaabisay Shirkada MGM ciyaarahaasi oo loogu magacdaray “Clash of the Clans”.
Kooxda Weerarka geysatay oo goobta ka baxsaday ayaa la sheegay inay labo kamid ah ku labisnaayeen dareeska ciidamada Khaaska ah ee Booliiska, halka nin sadexaadna uu iska soo dhigay haweenay, kuna dhex dhuuntay dadkii ku sugnaa Regency Hotel oo ku yaal waqooyiga caasimada Dublin. Kooxda falkan geysatay ayaa la sheegay inay ku baxsadeen gaari goobta ku sugayey.
Booliiska ayaa bilaabay hawlgal balaaran oo lagu baadi goobayo kooxda weerarkan geysatay, waxayna hay’adaha amaanka sheegeen in weerarkan uu la xariiro dagaal ka dhaxeeya Kooxaha Burcada ah ee wadankaasi ka hawlgala.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in weerarkan lala damacsanaa xubno goobta ku sugnaa, arrintaasi oo looga aargudayey sida la sheegay mid mid kamid ah hogaamiyayaasha burcada Dublin oo bishii September ee sanadkii tagay lagu khaarajiyey dalka Spain.
Sanaddihii lasoo dhaafay ayaa magaalada Dublin lagu dilay dad ka badan 200 qof, weeraradaasi oo ka dhaxeeyey kooxaha burcada wadankaasi.
Title: Ireland: Koox hubeysan oo weerar ku qaaday hotel ku yaal magaalada Dublin
Posted by galmada Net, Published at February 06, 2016 and have 0 comments